San Htun's Diary: Den Moines သွား တောလား...
ခရီးသွားနိုင်ကြသူ မမကွန်၊ မမီးငယ်တို့ ကို အားကျ၍ သွားချင်သော်ငြား မတတ်နိုင်သောကြောင့် လက်မှိုင်ချကာ နေရလေသည်။ တနေ့ သ၌ ဓာတ်ပုံများ ရှင်းလင်းရင်း တမြန်နှစ်က ကျောင်းခရီးစဉ်ဓာတ်ပုံများကို တွေ့ လိုက်ရသောအခါ၌ကား ဘလော့တွင် တင်ဖို့အခွင့်ရလေပြီဟု လက်ခမောင်း ခတ်လေသည်။ အချိန်အခါသမယကား ၂၀၁၁ ဧပြီ ၅ အင်္ဂါနေ့Spring Break Holidays ဆောင်းအကုန် နွေအကူး နေရောင်ခြည်ပွင့်လင်း သာယာလှပသော နေ့ ကလေး ဖြစ်သည်ဟု မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။
Den Moines ( ဒန် မွိုင်းစ်) သည် အိုင်အိုဝါပြည်နယ်၏ မြို့တော် ဖြစ်သည်။ Den Moines ခံတပ်ကို အတိုကောက် ခေါ်ဆိုရာကနေ မြို့အမည်တွင်သွားခြင်း ဖြစ်သည်။ ပြင်သစ်ပြည်ရှိ Den Moines မြစ်အမည် မှည့်တွင်ထားခြင်းဖြစ်မည်ဟု တွေးကြသည်။ မြို့တော်ကြီး၏ အဓိကလုပ်ငန်းသည် အာမခံလုပ်ငန်းဖြစ်ပြီး ထင်ရှားသော အာမခံကုမ္ပဏီ အမြောက်အမြားရှိသည်။ Best Place for Business in 2010 ၊ No.1 - America's Best Cities for Young Professionals. ၊ No.9- 2008 Best Cities List ၊ No.1 - Greenest city ဆုတံဆိပ်များ ရရှိထားသည့် မြို့တော် ဖြစ်သည်။
ပထမဆုံး မဲဆွယ်စည်းရုံးမှုသည် အမေရိကန်သမ္မတ မဲဆွယ်ပွဲအတွက် အရေးပါသောကြောင့် Den Moines မြို့တော်ကြီးတွင် ဌာနချုပ်ထားကာ မဲဆွယ်ပွဲများ စတင်ကြသည်။ ၂၀၀၇ The New York Times ဆောင်းပါးအရ မဲဆွယ်ပွဲများတွင် စိတ်အားထက်သန်မှု၊ အားပေးထောက်ခံမှုများကို Den Moines မြို့တော်ကြီးထက် သာလွန်ကောင်းမွန်သောနေရာမရှိ ဆိုသည်မှာ အငြင်းပွားဖွယ် မရှိဟု ဆိုသည်။
၁၈၈၆ ခုနှစ်တွင် တည်ဆောက်ပြီးစီးသော Iowa State Capitol ကို သွားရောက် လည်ပတ်ကြသည်။ ရွှေရောင်အမိုးခုံးကို အမိုးခုံးလေးခုက ဝန်းရံထားသော Iowa State Capitol နှင့် Rhode Island State Capitol နှစ်ခု အိုင်အိုဝါပြည်နယ်တွင် ရှိသည်။ မြို့တော်ဝန်ရုံး၊ တရားရုံး၊ ငါးထပ်ရှိ ဥပဒေစာကြည့်တိုက်၊ သမ္မတကတော်အရုပ်များ ရှိသည်။ ခရီးသွားအဖွဲ့ များ၊ ကျောင်းသားအဖွဲ့ များ လာရောက်လည်ပတ်ကြသည်။ မြေအောက်ထပ်တွင် အမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ်၊ စပိန် - အမေရိကန်၊ ကိုရီးယား၊ ဗီယက်နမ် စစ်ပြန်များကို ဂုဏ်ပြုထားခြင်း၊ အမှတ်တရ ပန်းပုလက်ရာများ ရှိသည်။
ဘယ်လိုတည့်တည့် မရသောကြောင့် ခေါင်းကြီးစောင်းကာ ကြည့်ကြပါကုန်။
The Pappajohn Sculpture Park ကို ပို့ ဆောင်ပေးသည်။ အနုပညာကို ဓာတ်ပုံရိုက်ရုံလောက်သာ ခံစားတတ်သော ငတိများကြောင့် ပန်းပုပညာရှင် လက်မှိုင်ချသွားလေသည်။
လာမစမ်းနဲ့ ..ကစ် ထည့်လိုက်မယ်..ဘာမှတ်လဲ..ဟွန်း
Front - Hoa Le (Vietnam), San Htun (Burma), Rama, Sunam
Middle - Andrew Gurung, Absheik Hada, Rajah Kumer
Last - Subas ( all are from Nepal)
ဤသို့ ဖြင့် တရံရောအခါက အိုင်အိုဝါပြည်နယ် မြို့တော်ကြီးဆီသို့ရောက်ဖူးခဲ့လေသည်။
ဇွန် ၂၂၊ ၂၀၁၂။
အားကျချက်ဗျာ.. ၁၀ ပုံမြောက်ဓာတ်ပုံကို အကြိုက်ဆုံးပဲ.. ဒါမျိုးက တော်ရုံတန်ရုံ ဓာတ်ပုံပညာရှင်တွေတောင် ရိုက်နိုင်တာမဟုတ်ဘူး..
Den Moines မြို့ကိုစန်းထွန်းနဲ့အတူရောက်ခဲ့ရပြီ
ကြည့်ရင်းနဲ့  ရောက်ဖူးချင်စိတ်တွေ ပေါ်လာတယ်။
ဘယ်လိုတည့်တည့် မရတဲ့ပုံကို ကင်းမြီးကောက်ထောင်ပြီး ကြည့်ပစ်လိုက်တယ်း) ခေါင်းပြတ်သရဲဆိုတဲ့ ပန်းပုကို အတော်ကြိုက်တယ်...ပုံကြည့်ပြီး ဟိုတွေး၊ သည်တွေးနဲ့တောင် တွေးလိုက်မိသေး...
စကားမစပ် အရေးအသားပုံစံတွေ ပြောင်းနေပါလား...မကွမ်ရဲ့ ရေးဟန်မျိုးဝင်သွားတယ်...
စန်းထွန်းနဲ့ ကပ်လိုက်ရတာ မောထှာ...:P:P
အထုပ်ကြီးပြင်၍ ထပ်ပြောင်းဖို့ ကြိုးစားနေပါကြောင်း။
စကားမစပ်Den Moines မရောက်ဖူးသေးပါကြောင်း။
ညီမစန်းထွန်းရဲ့ ရေးဟန်ရော၊တစ်ချို့ဒါ့ပုံတွေပါ အစ်မကွန်
၁၇ပုံမြောက် တိမ်တွေနောက်ခံနဲ့ပုံကတော့တကယ် လှ
ဓာတ်ပုံတွေ တအားလှ။ :)
စန်းထွန်းနဲ.အတူ Den Moines မြို.ကို လိုက်လည်လိုက်ပီ။
စန်းစန်းရဲ့ ခရီးသွားဆောင်းပါးတွေ ဓာတ်ပုံရိုက်ချက်တွေ သဘောကျတယ်။ အတွေးသစ် အမြင်သစ်လေးတွေ ဖတ်ရင်း ကြည့်ရင်း ဗဟုသုတတွေယူသွားပြီနော်။
ငွေကုန်ကြေးကျမများပဲ စားပွဲမှာထိုင်လျှက်က ခရီးထွက်လိုက်ရသလိုပါဘဲ..။ ဆက်လက်မျှဝေပေးပါဦး..။